Vaovao - fiaraha-miasa
Aza Tia Tena
Mba hahafantarana tsara kokoa ny tsirairay sy hanatsarana ny fiaraha-miasa ho an'ny JINJIA MACHINERY, ny orinasanay dia nandamina ny mpiasa rehetra hanana hetsika fiaraha-miasa ivelany amin'ny 16 Jonafaha, 2021. Ny lohahevitry ny hetsika dia ny «Firaisankina sy fiaraha-miasa - fiaraha-miasa».
Nanomboka tamin'ny 8:00 maraina izahay ary tonga tany amin'ny toerana tokony ho antsasak'adiny taty aoriana. Ny hetsika dia natao tamin'ny lalao samihafa. Ny lalao rehetra dia natao mba hampitomboana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'izy samy izy. Taorian'ny lalao dia nanao sakafo atoandro matsiro izahay irery. Nandritra ny fizotrany rehetra dia niara-niasa izahay, nampiseho ny fanahin'ny fiaraha-miasa JINJIA tena tsara.
Tena asa mahomby ataon'ny ekipa miasa an-kalamanjana ity. Manatsara ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-miasa izy io, ary mahazo ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa tsaratsara kokoa amin'ny orinasa. Amin'ny alàlan'ity hetsika ity, ny fahatokisana dia hiray hina amin'ny maha-ekipa akaiky kokoa antsika. Izy io dia mitondra ekipa tonga lafatra bebe kokoa amin'ny ho avy.
Ekipa sy ekipa fiaraha-miasa faran'izay tsara manome ny mpanjifantsika faritra sy serivisy fitaterana ambany kalitao tsara!